I-Ejensi Yezezakhiwo Grimaldi Messina Sud
I-ejensi yakho ethembekile yezezakhiwo
3.8 /5 amavoti (amavoti angama-8)
I-ejensi yezentengiso I-Grimaldi Messina South, ngo-Catania 198 eMessina, Sekuyiminyaka manje, bekulokhu kubhekiswa kunoma ngubani ofuna Ukuthenga, Ukuthengisa, Ukuqasha Ikhaya eMessina naseSifundazweni.
I-Grimaldi Messina Sud Real Estate Agency iyahambelana ne-Professionalism, Reliability kanye neKhono ku Umkhakha wezindawo zokuhlala ngenxa yolwazi olutholwe ngokuhamba kweminyaka, ukuqina komkhiqizo I-Grimaldi Immobiliare kanye nabasebenzi babathengisi bezindawo abasebenza kahle kakhulu.
I-ejensi yempahla I-Grimaldi UMessina Sud usebenzelana Nezindawo Zokuhlala, Ezentengiso Zezentengiso, Umhlaba futhi uxhumana ngokuthengisa noma ukuqashisa ukuze athole isisombululo esifaneleke kakhulu seKhasimende. Uma ufuna ikhaya ngaphakathi Qasha eMessina, uma kufanele Ukuthenga noma ukuthengisa indlu eMessina uthembele ochwepheshe bezezakhiwo: trust the ejensi yempahla I-Grimaldi Messina South.
I-Immobiliare Grimaldi Messina Sud - Thenga, Thengisa, Qasha indlu ngokuphepha
I-ejensi yezentengiso I-Grimaldi Messina South, ngo-Catania 198 a Messina, iyisikhungo esihle sokuthengiswa kwezindawo zokuhlala ongaxhumana naso uma ufuna ukuthenga, ukuthengisa, ukuqasha indlu eMessina futhi unesiqinisekiso sokuthi kulandelwa njalo kuzo zonke izigaba zokuthengiswa ngabasebenzi abaqeqeshiwe nabanobunzima beGrimaldi Consultants abazokwazi ukuphendula izidingo nezidingo zakho.
Nesikhungo Sokuthengiswa Kwezezakhiwo I-Grimaldi I-Messina Sud uzoba nokuphepha kokuncika kochwepheshe emkhakheni wezezakhiwo kanye nokuba ne-Grimaldi Consultant ozokuhola kusukela Ekuhlolweni nasekuboneni intengo yempahla, kuze kube sekupheleni kokuthengiswa ngosizo lwe-360 °.
I-Real Estate Agency Grimaldi Messina Sud - Thola impahla yakho ekahle
I-ejensi yezentengiso I-Grimaldi I-Messina Sud, ibonga abasebenzi bayo abasebenza kahle kakhulu baseGrimaldi Consultants, isipiliyoni esiqongelelwe ngaphezu kweminyaka yokuba khona emakethe yezindlu, kanye nesiqinisekiso somkhiqizo waseGrimaldi ongumlando.ejensi yezindawo zokuhlala eMessina ekahle uma ufuna indlu yamaphupho akho noma kufanele uthengise / uqashe impahla yakho futhi ufuna ukuyenza ngokuphephile.
I-ejensi yezentengiso I-Grimaldi IMessina Sud ihlala ifuna izixazululo zokusika ukuze ihlangabezane nezidingo zamakhasimende ayo, ngenxa yalesi sizathu ithembela kumathuluzi wokuphatha amasha nemikhankaso yokuphakamisa iziteshi eziningi (iziteshi zendabuko ezinjengokuphrinta, amapheshana kanye namamagazini e-web). Indawo yakho ne-Real Estate Agency I-Grimaldi I-Messina Sud kulula ukuyithola, noma ngabe ufuna ukuthenga, ukuthengisa noma ukuqasha indlu.
I-Immobiliare Grimaldi Messina Sud - Ubungcweti obukhulu kanye neKhono
I-ejensi yezentengiso I-Grimaldi Messina South yi-ejensi edumile yezezakhiwo eMessina, esekuphele iminyaka izifeza izifiso zalaba abafuna ukuthenga ikhaya lamaphupho abo, abathengisa noma ukuqasha impahla yabo. Ngenxa yethimba labo abaqeqeshiwe kakhulu beGrimaldi Consultants, i-Arhente ibilokhu ilandela abathengi igxathu negxathu ekuthengeni nasekuthengiseni izakhiwo zabo iminyaka. Ukuthola eminye imininingwane, vakashela endlunkulu yeSikhungo nge-Catania 198 eMessina futhi unganqikazi ukuxhumana ne-Real Estate Agency I-Grimaldi Messina South.
Ikheli: Nge-Catania, 198
Ucingo: 090 2931748
Umakhala ekhukhwini: 349 0900702
Yefeksi: 090 2932499
Inombolo ye-VAT: 02842820835